केबीसीमा आएका अतिथिले अमिताभलाई सोधे ‘तपाई लुगा पुरानो भयो भने पोछा बनाउनुहुन्छ’ ? अमिताभले दिए यस्तो जवाफ (भिडियो हेर्नुस्) « Gaunbeshi
केबीसीमा आएका अतिथिले अमिताभलाई सोधे ‘तपाई लुगा पुरानो भयो भने पोछा बनाउनुहुन्छ’ ? अमिताभले दिए यस्तो जवाफ (भिडियो हेर्नुस्)
एजेन्सी । दर्शकहरु अमिताभ बच्चन को क्विज शो कौन बनेगा करोडपति १३ हेरिरहेका छन् । उनको कार्यक्रममा प्रस्तुत हुने शैली धेरैले मनपराउँछन् । विशेष सेलिब्रिटी अतिथिहरु केबीसी १३ मा हरेक शुक्रवार आउँछन्।
अभिनेता पंकज त्रिपाठी र प्रतीक गान्धी शुक्रवार कौन बनेगा करोडपति को स्टेज मा देखिनेछन्। शो को धेरै हास्यास्पद प्रोमो बाहिर आएको छ । एक प्रोमो देखिएको छ, जसमा पंकज र प्रतीक अमिताभ बच्चनलाई फिल्मका डायलग बोल्न आग्रह गरेका छन् ।
अमिताभले प्रतीक पंकजलाई एउटा चुनौती दिए
सोनी इन्टरटेन्मेन्ट टेलिभिजनको आधिकारिक इन्स्टाग्राम एकाउन्ट बाट एक प्रोमो जारी गरिएको छ। यसमा अमिताभ बच्चन, पंकज त्रिपाठी र प्रतीक गान्धीलाई फिल्म ‘दीवार’ बाट बिहारी र गुजराती भाषामा संवाद बोल्न भनेका छन् । अमिताभ आफ्नो संवाद को पहिलो लाइन बोल्छन् ‘आज खुश तो बहुती होगी तुम। यसमा, पंकज र प्रतीक भोजपुरी र गुजराती मा यसलाई भन्नुपर्नेछ ।
पंकज त्रिपाठीले भोजपुरीमा अमिताभको संवाद आज खुश बहुती होइब तूु भने। एकै समयमा, प्रतीक गुजराती मा संवाद बोले। तर अमिताभ बच्चनले उनीहरुलाई बीचमै रोके। अमिताभले भने पर्खनुहोस् ।।। पर्खनुहोस् यो अझै समाप्त भएको छैन।ु त्यसपछि पंकज त्रिपाठी र प्रतीकले आफ्नो हाँसो रोक्न सकेनन्।
कार्यक्रमको अर्को प्रोमोमा, प्रतीक गान्धीले अमिताभ बच्चनलाई सोधिरहेका छन् कि यदि उनको घरमा टिभीको रिमोटले काम गरेन भने के गर्नुहुन्छ रु के हामीले जस्तै ठो क्नु हुन्छ ? लुगा पुरानो भयो भने के त्यसको पोछा बनाउनुहुन्छ ? यस्तो प्रश्न सुनेर अमिताभ बच्चन अरे बाफ रे भन्दै हाँस्न थाले ।